Dorsal Striatum ရှိကိုကင်းနှင့် Dopamine: ကိုကင်းစွဲစွဲလမ်းစေသောတွန်းအားယန္တရား
Dorsal Striatum အတွက်ကိုကင်းတွေကိုနှင့် Dopamine: ကိုကင်းစွဲ (2006) တွင်တဏှာ၏ယန္တရား
comments: ကင်းတာကဲ့သို့ကြီးမားသော Cue activation (dorsal striatum)
Nora ဃ Volkow1,
ခရစ္စတိုဖာ Wong က3
နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine တိုးမြှင့်ဖို့အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများများ၏စွမ်းရည်ကိုသူတို့ရဲ့အားဖြည့်သက်ရောက်မှုအခြေခံ။ သို့သော် preclinical လေ့လာမှုများထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုနှင့်အတူမူးယစ် (အေးစက်လှုံ့ဆော်မှု) ဖြင့်တွဲကြားနေလှုံ့ဆော်မှုမူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူအခြေခံနိုင်ကြောင်းတစ်ခုသက်ရောက်သောမိမိကိုယ်ကိုအားဖြင့် dopamine တိုးမြှင့်ဖို့စတင်ပြသခဲ့ကြသည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ dopamine တိုးကိုကင်းစွဲလူ့ဘာသာရပ်များအတွက်နှင့်ဤမူးယစ်ဆေးတဏှာနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ရှိမရှိ conditional လှုံ့ဆော်မှုမှပေါ်ပေါက်ခြင်းရှိမရှိစမ်းသပ်ရန်။ ကျနော်တို့ positron ထုတ်လွှတ် tomography သုံးပြီးဆယ်ရှစ်ယောက်ကိုကင်း-စွဲဘာသာရပ်များစမ်းသပ်ပြီးနှင့် [11ကို C] raclopride (dopamine: D2 endogenous dopamine နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ဖို့အထိခိုက်မခံအဲဒီ receptor radioligand) ။ ကျနော်တို့ [၏ binding တိကျတဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် dopamine ပြောင်းလဲမှုများတိုင်းတာ11ဘာသာရပ်များသူတို့တစ်တွေကင်း-cue ကဗီဒီယို (ကိုကင်းဆေးလိပ်ဘာသာရပ်များ၏မြင်ကွင်းများ) စောင့်ကြည့်ရသောအခါနှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးကြားနေကဗီဒီယို (သဘာဝမြင်ကွင်းများ) စောင့်ကြည့်ရသောအခါကို C] raclopride ။ ၏ binding အဆိုပါတိကျတဲ့ [11ကို C] dorsal အတွက် raclopride (caudate နှင့် putamen) သော်လည်းမ ventral striatum အတွက် (နျူကလိယတည်ရှိသည် accumbens ထားတဲ့အတွက်) သိသိသာသာကိုကင်း-cue အခြေအနေလျှော့ချနှင့်ဤလျှော့ချရေး၏ပြင်းအားတဏှာ၏ Self-အစီရင်ခံစာများဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ ထို့အပွငျကုသမှုရလဒ်များကြိုတင်ခန့်မှန်းပြခဲ့ကြပြီဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေနဲ့စွဲပြင်းထန်မှုများအတိုင်းအတာအပေါ်အမြင့်ဆုံးရမှတ်နှင့်အတူဘာသာရပ်များ, dorsal striatum တွင်အကြီးဆုံး dopamine အပြောင်းအလဲများရှိခဲ့သည်။ ဒါက dorsal striatum (အလေ့အထသင်ယူမှုနှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုစတင်များတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရဒေသ) တွင် dopamine တဏှာနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းတဲ့အခြေခံအကျဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားပေးစွမ်းသည်။ တဏှာပြန်သွားကြသည်ရန်သော့ချက်ပံ့ပိုးသောကွောငျ့, Conditions တုံ့ပြန်မှုကနေ dopamine တိုးဟန့်တားရည်ရွယ်မဟာဗျူဟာကိုကင်းစွဲအတွက်ကုထုံးအကျိုးရှိသောဖြစ်ဖွယ်ရှိပါသည်။
သူတို့ရဲ့အားဖြည့်သက်ရောက်မှုအခြေခံယုံကြည်ကြောင်းတစ်ခုသက်ရောက်သောနျူကလိယ accumbens (NAc) တွင်အလွဲသုံးစားမှုတိုး dopamine (DA), (၏မူးယစ်ဆေးဝါးdi Chiara နှင့် Imperato, 1988; Koob နှင့် Bloom, 1988) ။ သို့သော်ဤစူးရှသောအကျိုးသက်ရောက်မှုမူးယစ်ဆေးများအတွက်ပြင်းထန်သောဆန္ဒနှင့်အစွဲဘာသာရပ်များထိုကဲ့သို့သောသူတို့ကမူးယစ်ဆေးယူကြပြီနေရာများ, ယခင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူလူအဖြစ်မူးယစ်ဆေးတွေကိုထိတွေ့သည့်အခါဖြစ်ပေါ်သော compulsive အသုံးပြုမှုနှင့်ရန်အသုံးပြု paraphernalia ရှင်းပြမထားဘူး မူးယစ်ဆေးစီမံခန့်ခွဲ။ Cue-ရူးနှမ်းတဏှာ (စွဲလမ်းအတွက် relapse ၏သံသရာအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်O 'Brien et al ။ , 1998) ။ သို့သော် cue-ရူးနှမ်းတဏှာအတွက်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများထက်ပိုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာတွင်၎င်း၏နောက်ခံဦးနှောက် neurochemistry မသိရသေးပေ (Childress et al ။ , 2002) ။ DA ဆုလာဘ်နှင့်ဆုလာဘ်များခန့်မှန်း (နဲ့အတူပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ neurotransmitter သောကွောငျ့ပညာရှိ Rompre, 1989; Schultz et al ။ , 1997), မူးယစ်ဆေးတွေကိုအားဖြင့် DA လွှတ်ပေးရန် cue-ရူးနှမ်းတဏှာအဘို့ခိုင်ခံ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအလွှာဖြစ်ပါတယ်။ ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုသူတို့က, ထပ်ခါတလဲလဲအသင်းအဖွဲ့များနှင့်အတူ NAc နှင့် dorsal striatum အတွက် DA တိုးမြှင့်ဖို့စွမ်းရည်ဆည်းပူးပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးကြိုးမူးယစ်ဆေးနှင့်အတူတွဲကြသောအခါ (အေးစက်တွေကိုဖြစ်လာ), နှင့်ဤ neurochemical တုံ့ပြန်မှုမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်လျက်ရှိသည်: ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လေ့လာရေးဒီယူဆချက်ကိုထောကျပံ့ ကြွက်များတွင် -seeking အပြုအမူ (di Ciano နှင့် Everitt, 2004; Kiyatkin နှင့် Stein, 1996; Phillips က et al ။ , 2003; Vanderschuren et al ။ , 2005; Weiss et al ။ , 2000) ။ အရာလှုံ့ဆော်မှု DA ဦးနှောက်ထဲမှာတိုးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတဏှာ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္အတွေ့အကြုံများကိုအတွက်ဆက်နွယ်နေကြောင်းတိုးစေနိုင်သည်အေးစက်ဖို့အတိုင်းအတာလူ့ဘာသာရပ်များအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးကြပြီမဟုတ်။ imaging နည်းပညာများယခုမူးယစ်ဆေးတွေကိုထိတွေ့သည့်အခါ preclinical လေ့လာမှုများဤတွေ့ရှိချက်လူ့မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲဘာသာရပ်များ၏အတွေ့အကြုံသို့ဘာသာပြန်ဆိုရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enable ။
ဤတွင်ကျနော်တို့မူးယစ်-related တွေကိုထိတွေ့သောအခါအစွဲဘာသာရပ်များအားဖြင့်ကြုံတွေ့ယင်းတဏှာအခြေခံ DA အတွက်တိုးပွါးသောအယူအဆစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်။ ကျနော်တို့ကိုကင်းတွေကိုကင်းတဏှာနှင့်ပိုပြီးပြင်းထန်စွဲနှင့်အတူဘာသာရပ်များလျော့နည်းပြင်းထန်သောစွဲနှင့်အတူဘာသာရပ်များထက် conditional လှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်ပိုကြီး DA တိုးရှိသည်မယ်လို့သောတိုးဖို့အချိုးအစားအတွက် striatum အတွက် extracellular DA တိုးမြှင့်မယ်လို့တွေးဆ။ ဒီယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ကျနော်တို့ positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) နဲ့ 18 ကင်း-စွဲဘာသာရပ်များလေ့လာ [11ကို C] raclopride တစ် DA: D2 endogenous DA နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ဖို့အထိခိုက်မခံအဲဒီ receptor ligand (Volkow et al ။ , 1994) ။ ဘာသာရပ်များနှစ်ခု counterbalanced အခြေအနေများအောက်တွင်2သီးခြားရက်ကိုစမ်းသပ်ခဲ့ကြသည်: တစ်ကြားနေကဗီဒီယို (သဘာဝရှုခင်း) ၏တင်ပြချက်စဉ်နှင့်တစ်ဦးကိုကင်း-cue ကဗီဒီယို (အက်ကွဲကိုကင်းများနှင့် simulated ဆေးလိပ်သောက်ဘို့ပြင်ဆင်မှုဖေါ်ပြခြင်းမြင်ကွင်းများ () ၏တင်ပြချက်စဉ်အတွင်းChildress et al ။ , 1999) ။ [11ကို C] binding raclopride (အလွန်အမင်း reproducible ဖြစ်ပါသည်Volkow et al ။ , 1993), နှင့်က (အခြေအနေနှစ်ခုအကြား binding တိကျတဲ့အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုအများစု extracellular DA အတွက်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်သို့မဟုတ်အပြုအမူ-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကိုရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းပြသလျက်ရှိသည်Breier et al ။ , 1997).
ကြော်ငြာတစ်ခုမှတုန့်ပြန်သောတက်ကြွသောကိုကင်းစွဲနေသောဘာသာရပ် ၁၈ ခုကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များသည်ကိုကင်းမှီခိုမှုအတွက် DSM-IV (စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်၊ စတုတ္ထထုတ်ဝေမှု) စံနှုန်းများကိုပြည့်စုံစေပြီးအနည်းဆုံးတစ်ပတ်လျှင်အနည်းဆုံး“ လေးဂရမ်” အခမဲ့သုံးစွဲနိုင်သည် (၆ - ၆ လ) အထိတက်ကြွစွာအသုံးပြုသူများဖြစ်သည်။ ဖယ်ထုတ်ခြင်းစံသတ်မှတ်ချက်များတွင်ကိုကင်းမှီခိုခြင်း မှလွဲ၍ လက်ရှိသို့မဟုတ်အတိတ်စိတ်ရောဂါရောဂါ၊ အတိတ်သို့မဟုတ်ပစ္စုပ္ပန်အာရုံကြော, နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာသို့မဟုတ် endocrinological ရောဂါ၏သမိုင်း, သတိဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူခေါင်းကိုစိတ်ဒဏ်ရာ၏သမိုင်း> မိနစ် 6; နှင့်လက်ရှိဆေးဝါးကုသမှုနာမကျန်းမှုနှင့်ကိုကင်းသို့မဟုတ်နီကိုတင်း တို့မှလွဲ၍ အခြားဆေးဝါးမှီခိုမှုတို့ဖြစ်သည်။ စားပွဲတင် 1 အဆိုပါဘာသာရပ်များအပေါ်လူဦးရေအချိုးအစားနှင့်လက်တွေ့သတင်းအချက်အလက်ပေးစွမ်းသည်။ Written အသိပေးသဘောတူညီခကျြအားလုံးဘာသာရပ်များအတွက်ရရှိသောခဲ့သည်။
ကိုကင်းတဏှာအကဲဖြတ်ရန်ကျနော်တို့ကို (ကိုကင်းတဏှာမေးခွန်းလွှာ (CCQ) ၏အကျဉ်းချုပ် version ကိုအသုံးပြုခဲ့Tiffany et al ။ , 1993), အရာခုနစ်မှတ်အမြင်အာရုံ Analog စစကေးအပေါ်လက်ရှိကင်းတဏှာ (သုံးစွဲဖို့အလိုဆန္ဒ, သုံးစွဲဖို့ရည်ရွယ်ချက်နှင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, အပြုသဘောရလဒ်, ဆုတ်ခွာသို့မဟုတ်စိတ်ပျက်စရာရောဂါလက္ခဏာတွေကနေကယ်ဆယ်ရေး၏မျှော်လင့်ခြင်း, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုမရှိခြင်း၏မျှော်လင့်) တန်ဖိုး။ ပျမ်းမျှရမှတ်ကိုကင်းတဏှာ၏အတိုင်းအတာအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါ CCQ မီနှင့်ဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးမှာရယူခဲ့ပါတယ်။
ကိုကင်းစွဲ၏ပြင်းထန်မှုအကဲဖြတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့စွဲ Severity Index (asi) (ကိုအသုံးပြုMcLellan et al ။ , 1992) နှင့်ကိုကင်းရွေးချယ်ပြင်းထန်မှုအကဲဖြတ်စကေး (CSSA) (Kampman et al ။ , 1998) ။ ASI သည်နယ်ပယ် (၇) ခု (မူးယစ်ဆေး၊ အရက်၊ စိတ်ရောဂါ၊ မိသားစု၊ ဥပဒေရေးရာ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်အလုပ်အကိုင်) တို့တွင်ပြင်းထန်မှုကိုအကဲဖြတ်ပြီးကန ဦး တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင်ရရှိခဲ့သည်။ ဤဒိုမိန်းခုနစ်ခုတွင်ပျမ်းမျှအားဖြင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုစွဲလမ်းမှုပြင်းထန်မှုကိုတိုင်းတာခဲ့သည်။ CSSA သည်အစောပိုင်းကိုကင်းတားခြင်း၏လက္ခဏာ ၁၈ ခုကိုတိုင်းတာသည် ၀ မှ ၇ အထိအလိုအလိုက်အတိုင်းအတာဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ CSSA ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုမတိုင်မီရရှိခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ [မြင့်မားသော resolution ကို + tomograph (resolution ကို 4.5 × 4.5 × 4.5 မီလီမီတာ Full-width ကိုဝက်အများဆုံး, 63 ချပ်) နဲ့အသုံးပြုခဲ့11ကို C] ယခင်ကဖော်ပြထားနည်းလမ်းများသုံးပြီး raclopride (Volkow et al ။ , 1993) ။ အတိုချုပ်, ထုတ်လွှတ် Scan ဖတ်ချက်ချင်း 4-8 MCI (bombardments ၏အဆုံးမှာတိကျတဲ့လှုပ်ရှားမှု 0.5-1.5 Ci / μm) ၏ဆေးထိုးပြီးနောက်စတင်ခဲ့ခဲ့ကြသည်။ နှစ်ဆယ်ပြောင်းလဲနေသောထုတ်လွှတ် Scan ဖတ် 54 မိမှတက်ထိုးအချိန်ကနေရယူခဲ့ကြသည်။ သွေးလွှတ်ကြောနမူနာစုစုပေါင်း Carbon-11 နှင့်မပြောင်းလဲ [များကိုတွက်ချက်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်11ကို C] ပလာစမာထဲမှာ raclopride ။ ဘာသာရပ်များ [အတူ2ကွဲပြားခြားနားသောရက် scan ဖတ်ခဲ့သည်11ကိုကင်း (ကင်း-cue ခွအေနအေ) ဆေးလိပ်ဘာသာရပ်များပုံဖော်တဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေစဉ်သဘာဝမြင်ကွင်းများ (ကြားနေခွအေနအေ) နှင့် (1) ၏ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုကြည့်နေစဉ်ကို C] အောက်တွင် raclopride ကျပန်းအခြေအနေများ (2) အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ Videos ကို [၏ဆေးထိုးမတိုင်မီ 10 မိစတင်ခဲ့ကြသည်11ကို C] raclopride နှင့် radiotracer ဆေးထိုးပြီးနောက် 30 မိဘို့ဆက်လက်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါကြားနေဗီဒီယိုအားသဘာဝပုံပြင်များ၏ nonrepeating အစိတ်အပိုင်းများ featured, နှင့်ကင်း-cue ကဗီဒီယိုကိုကင်းများ၏ဝယ်ယူ, ပြင်ဆင်မှုနှင့်ဆေးလိပ်သောက် simulated ကြောင်းမြင်ကွင်းများပုံဖော်အစိတ်အပိုင်းများ nonrepeating featured ။
ဒေသဖော်ထုတ်ခြင်း, ကြှနျုပျတို့ 10-54 မိထံမှယူပုံရိပ်တွေကနေအချိန်ဘောင်ချုပ်ဖော်ပြနှင့် intercommisural လေယာဉ်တလျှောက်သူတို့ကို resliced ​​။ လေယာဉ် 12 အဆိုပါ caudate လွှမ်းခြုံလေယာဉ်, putamen, ventral striatum နှင့်အသီးသီးလေး, သုံး, တစျဦး, နှစ်ဦးလေယာဉ်ပေါ်တွင်တိုင်းတာခဲ့ပြီးသော cerebellum, ရရှိရန်နှစ်ဦး၏အုပ်စုများအတွက်ဆက်ပြောသည်ခဲ့ကြသည်။ ညာဘက်နှင့်ဘယ်ဘက်ကိုဒေသများတွင်ပျမ်းမျှခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားဒေသများတွင်အချိန်သာရှိပြီးပြည်ပမှကို C-11 ၏ပြင်းအားရယူဖို့ပြောင်းလဲနေသော Scan ဖတ်မှ projected ခဲ့ကြသည်။ တစ်ရှူးအာရုံစူးစိုက်မှုအဘို့ဤအအချိန်ကုန်လှုပ်ရှားမှုခါးဆစ်, ပလာစမာထဲမှာမပြောင်းလဲ tracer များအတွက်အချိန်-လှုပ်ရှားမှုခါးဆစ်နှင့်အတူ [၏လွှဲပြောင်းစဉ်ဆက်မပြတ်တွက်ချက်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြ11ကို C] ဦးနှောက်မှသွေးရည်ကြည်ထဲကနေ raclopride (K1) နှင့် Reversible လုပ်စနစ်များများအတွက်သော graphical ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ technique ကိုသုံးပြီး striatum နှင့် cerebellum အတွက်, ပလာစမာအာရုံစူးစိုက်မှုမှတစ်ရှူးအာရုံစူးစိုက်မှု၏အချိုးအစား၏ equilibrium တိုင်းတာခြင်းမှကိုက်ညီသောဖြန့်ဖြူး volumes ကို (DVs), (Logan et al ။ , 1990) ။ cerebellum အတွက်မှ striatum အတွက် DV များ၏အချိုး [အဲဒီ receptor အာရုံစူးစိုက်မှု (Bmax) / ဆှဖှေဲ့ (KD)] မှကိုက်ညီ + 1 နှင့်ဦးနှောက်သွေးစီးဆင်းမှုအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုမှအာရုံမခံစားနိုင်သောဖြစ်ပါသည် (Logan et al ။ , 1994) ။ DA အပေါ်ကိုကင်း-cue ဗီဒီယိုအကျိုးသက်ရောက်မှုဟာကြားနေဗီဒီယိုလေးစားမှုနှင့်အတူ Bmax / KD အတွက်ရာခိုင်နှုန်းပြောင်းလဲမှုအဖြစ် quantified ခဲ့သည်။
အဆိုပါ DA အပြောင်းအလဲများကိုငါတို့သည်လည်း (စာရင်းအင်း parametric မြေပုံ (SPM) ကို အသုံးပြု. DV ပုံရိပ်တွေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖြစ်ပွားခဲ့သည်ထားတဲ့အတွက် striatum, အတွင်းတည်နေရာ corroborate မှFriston et al ။ , 1995) ။ တွဲ t စမ်းသပ်မှုဟာကြားနေနှင့်ကိုကင်း-cue အခွအေနေကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့ဖျော်ဖြေခဲ့ကြ (p <0.05 တညျ့, တံခါးခုံ> ကို 100 voxels) ။
အဆိုပါအမူအကျင့်များနှင့်ပေအစီအမံအပေါ်အခြေအနေများအကြားကွာခြားချက်များစုံတွဲနဲ့အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည် t စမ်းသပ်မှုများ (Two-tailed) ။ ကုန်ပစ္စည်းယခုအချိန်တွင်ဆက်စပ်မှုဟာ DA အပြောင်းအလဲများနှင့်အမူအကျင့်အစီအမံ (CCQ, asi နှင့် CSSA) အကြားဆက်စပ်မှုအကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
[အပေါ်ကိုကင်းတွေကိုသက်ရောက်မှုများ11ကို C] raclopride အစီအမံ
လက်ဝဲနှင့်လက်ယာဒေသများတွင်အကြားအဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှုရှိကြ၏သောကြောင့်, ကျနော်တို့လက်ဝဲနှင့်လက်ယာ striatal နှင့် cerebellar ဒေသများတွင်ပျမ်းမျှရမှတ်များအတွက်ရလဒ်များကိုသတင်းပို့ပါ။ အဆိုပါ K1 အတိုင်းအတာ (ဦးနှောက်ဒေသများတွင်မဆိုဘို့အခြေအနေများအကြားကွဲပြားဘူးစားပွဲတင် 2) ။ ဒါက tracer ပေးပို့သည့်ကိုကင်း-cue ခွအေနအေကြောင့်ထိခိုက်မခံခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြသည်။
K1 အဆိုပါကြားနေများအတွက် (သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပလာစမာကနေတစ်သျှူးဖို့စဉ်ဆက်မပြတ်) နှင့် DV အစီအမံများနှင့်ကင်း-cue ကဗီဒီယိုအခြေအနေများနှင့် t နှင့် p သူတို့ရဲ့နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်တန်ဖိုးများ (တွဲ Two-အမြီး t စမ်းသပ်မှု)
အဆိုပါ DV (ထို putamen အတွက်ကြားနေအခြေအနေထက်ကိုကင်း cue အတွက်သိသိသာသာနိမ့်ခဲ့p <0.05) နှင့် caudate အတွက်လမ်းကြောင်းသစ်ပြသခဲ့သည် (p <0.06) ဒါပေမယ့် ventral striatum သို့မဟုတ် cerebellum အတွက်ကွဲပြားခြားနားဘူး (စားပွဲတင် 2) ။ SPM ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (dorsal အတွက်သိသာထင်ရှားသော DV လျှော့ချရေး (caudate နှင့် putamen) corroborated သော်လည်းမ ventral striatum အတွက်သဖန်းသီး။ 1).
ဒဖြန့်ဖြူး volume ထဲမှာခြားနားချက်ဖေါ်ပြခြင်း SPM နှင့်အတူရရှိသောဦးနှောက်မြေပုံ [11ကို C] ကကြားနေနှင့်ကိုကင်း-cue အခြေအနေများ (အကြား raclopridep <0.05, အမှားမမှန်, တံခါးခုံ> ကို 100 voxels) ။ အဆိုပါ ventral striatum (-8 canthomeatal လေယာဉ်) တွင်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိခဲ့သည်သတိပြုပါ။
: D ရောင်ပြန်ဟပ်သော Bmax / KD အစီအမံ,2 endogenous DA ကသိမ်းပိုက်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်း receptors, (caudate အတွက်ကြားနေအခြေအနေထက်ကိုကင်း cue အတွက်သိသိသာသာနိမ့်ခဲ့ကြt = 2.3; p <0.05) နှင့် putamen ၌တည်၏ (t = 2.2; p <0.05) ဒါပေမယ့် ventral striatum အတွက်ကွဲပြားခြားနားဘူး (t = 0.37; p = 0.71) (သဖန်းသီး။ 2A) ။ ဤသည်ကိုကင်းတွေကိုပု dorsal striatum အတွက် DA လွှတ်ပေးရန်သွေးဆောင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
A, Dopamine: D2 caudate, putamen, နှင့်ကြားနေနှင့်ကိုကင်း-cue အခြေအနေများအဘို့အ ventral striatum အတွက်အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု (Bmax / KD) ။ B(ထို CCQ နှင့်အတူအကဲဖြတ်), တဏှာအစီအမံဟာကြားနေ၏ (Pre) နှင့်အပြီး (post ကို) တင်ဆက်မှုနှင့်ကိုကင်းဗီဒီယိုများမီ။ CDA ပြောင်းလဲမှုများ (ထိုကြားနေခွအေနအေကနေ Bmax / KD အတွက်ရာခိုင်နှုန်းအပြောင်းအလဲများကို) နှင့်ကိုကင်းတဏှာပြောင်းလဲမှုများ (CCQ ရမှတ်များအတွက်ကြိုတင်နဲ့ post ကွဲပြားမှု) အကြားဆက်စပ်မှုအဘို့, Regression တောင်စောင်း။ တန်ဖိုးများကို SDs ±နည်းလမ်းများကိုကိုယ်စားပြုသည်။ နှိုင်းယှဉ်တွဲကိုက်ညီတဲ့ t စမ်းသပ်မှုများ (Two-tailed) *p <0.05; **p <0.01 ။
အဆိုပါကင်း-cue ဗီဒီယိုကိုသိသိသာသာ (2.9 ± 1.4 မှ 3.5 ± 1.4 ကနေတဏှာရမှတ် (CCQ) တိုးမြှင့်t = 2.9; p <0.01), ကြားနေဗီဒီယိုကိုမသော်လည်း, ဗွီဒီယိုမတိုင်မီရမှတ်များမှာ 2.8 ± 1.6 ဖြစ်ပြီး၊ ဗွီဒီယိုပြီးနောက် 3.0 ± 1.7 (t = 1.1; p <0.30) (သဖန်းသီး။ 2B) ။ တဏှာအတွက်အပြောင်းအလဲများနှင့် DA အပြောင်းအလဲများအကြားဆက်စပ်မှုလက်ဝဲနှင့်လက်ယာဒေသများတွင်များအတွက်ကွာခြားခဲ့ပါဘူးဤသို့ကျနော်တို့ပျမ်းမျှတိုင်းတာမှုများအဘို့အဆက်စပ်မှုအပေါ်သတင်းပို့ပါ။ ဤရွေ့ကားဆက်စပ်မှု (putamen အတွက်သိသာထင်ရှားသောခဲ့ကြသည်r = 0.69; p <0.002) နှင့် caudate ၌တည်၏r = 0.54; p = 0.03) သော်လည်းမ ventral striatum အတွက် (r = 0.36; p = 0.14) (သဖန်းသီး။ 2C).
အဆိုပါ DA အပြောင်းအလဲများနှင့်လက်တွေ့အကြေးခွံများအကြားဆက်စပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့် CSSA နှင့် caudate အတွက် DA အပြောင်းအလဲများကို (အကြားသိသိသာသာအသင်းအဖွဲ့ထင်ရှားr = 0.55; p <0.01) နှင့် putamen အတွက်လမ်းကြောင်းသစ် (r = 0.40; p = 0.10) ။ အလားတူပဲ, asi အပေါ်ရမှတ်များသိသိသာသာ (ညာ putamen အတွက် DA အပြောင်းအလဲများကိုဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်r = 0.47; p <0.05), ဘယ်ဘက်နှင့်ညာဘက် ventral striatum (r = 0.50; <0.04) နှင့်ဘယ်ဘက် caudate အတွက်လမ်းကြောင်းသစ် (r = 0.41; p = 0.09) ။ အဆိုပါ CSSA နှင့် asi ပိုကြီးတဲ့ဟာ DA အပြောင်းအလဲများအပေါ်ပြင်းထန်မှု သာ. ။
: D များ၏အစီအမံအကြားဆက်စပ်မှု2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုဟာကြားနေဗီဒီယိုပြသနေစဉ်ရရှိသောနှင့်လက်တွေ့အကြေးခွံ (CCQ, CSSA နှင့် asi) သိသာထင်ရှားသောကြဘူး။
striatum အတွက် DA အပေါ်ကိုကင်းတွေကိုသက်ရောက်မှုများ
ဤတွင်ကျနော်တို့ကိုကင်းတွေကိုပြသတဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ကင်း-စွဲဘာသာရပ်များအတွက် dorsal striatum အတွက် DA အတွက်တိုးမြှင့်ပြသပါ။ ဤရလဒ်သည်ကိုကင်းတွေကိုတုံ့ပြန်ကြွက်များတွင် dorsal striatum အတွက် extracellular DA အတွက်တိုးမှတ်တမ်းတင် microdialysis လေ့လာမှုများ (နဲ့အတူသဘောတူညီချက်၌ရှိကြ၏Ito က et al ။ , 2002) ။ သို့သော် microdialysis လေ့လာမှုများကို (ကိုကင်းတွေကိုဆက်ပြောပါတယ်တင်ပြခဲ့ကြသည်တဲ့အခါမှသာ dorsal striatum အတွက် DA တိုးအစီရင်ခံတင်ပြIto က et al ။ , 2002), noncontingent တင်ဆက်မှုသော်လည်း (အ NAc အတွက်အစား DA တိုးလာNeisewander et al ။ , 1996) ။ အဆိုပါဘာသာရပ်များဗီဒီယိုကြည့်ဖို့ဆိုတုံ့ပြန်မှုထုတ်လွှတ်ရန်လိုအပ်သော်လည်းကင်းတွေကို dorsal striatum နှင့်မဟုတ် ventral striatum အတွက်သိသာထင်ရှားသော DA တိုး (NAc တည်ရှိပြီးသော) ရူးနှမ်းမဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာကိုကင်းတွေကို noncontingent ခဲ့ကြသည်။ ဤသည် preclinical နှင့်လက်တွေ့ Paradigm အကြားခြားနားချက်များကိုထင်ဟပ်ဖွယ်ရှိဖြစ်၏ အဆိုပါကင်း-စွဲဘာသာရပ်များအဘို့, "ကိုကင်းတွေကို" နဲ့မြင်ကွင်းများထိတွေ့မူးယစ်ဆေးဖြန့်ဝေကြိုတင်ခန့်မှန်းပေမယ့်အစားမူးယစ်ဆေးရယူဖို့လိုအပ်သောအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့သူတို့ကို primes ပါဘူးသော်လည်းအထူးသ, ကြွက်, ထိုတွေကိုတုံ့ပြန်မူးယစ်ဆေးဝါးပို့ဆောင်မှုခန့်မှန်းကြောင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားလျက်ရှိသည်။ ဒါကကင်း၏ပေးပို့အလိုအလျှောက်ပေါ်ပေါက်မည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်, ကြွက်များတွင်ဆက်ပြောပါတယ်တင်ဆက်မှုများအတွက်ကိစ္စတွင်ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်, အပြုအမူများထုတ်လွှတ်မှုလိုအပ်သည်။ အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုမသက်ဆိုင်ထုတ်လွှတ်သည့်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု (၏မူးယစ်ဆေးဝါးပို့ဆောင်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းကိုကင်းတွေကိုဆန့်ကျင်အတိုင်းမူးယစ်ဆေးရယူဖို့ရန်လိုအပ်သောအခါထို့ကြောင့်ကိုကင်းတွေကိုအားဖြင့် dorsal striatum ၏ DA activation ဖြစ်ပေါ်ပုံVanderschuren et al ။ , 2005) ။ ဤ (လုပ်ရပ်များ၏ရွေးချယ်ရေးနှင့်စတင်အတွင်း dorsal striatum ၏အခန်းကဏ္ဍကိုနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်Graybiel et al ။ , 1994).
dorsal striatum နှင့်တဏှာအတွက် Dopamine
ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ကိုကင်းတဏှာနှင့် dorsal striatum အတွက် DA တိုး (caudate နှင့် putamen) အကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့ပြသပါ။ dorsal striatum မှ DA ဆဲလ်ကနေအဓိကစီမံကိန်းသည် substantia nigra (ပေါ်ထွန်းသောကြောင့်Haber နှင့် Fudge, 1997), ဒီတဏှာ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္အတွေ့အကြုံကိုအတွက် DA nigrostriatal လမ်းကြောင်း implicates ။ ဒီ function သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) နဲ့အသှေးကိုအောက်ဆီဂျင်အဆင့်ကို-မှီခို (BOLD) အပြောင်းအလဲများကို [အနုတ်လက္ခဏာအသင်းအဖွဲ့ (အားဖြင့်အကဲဖြတ်အဖြစ်ကိုကင်းချိုးဖောက်သည့် putamen ၏ activation သွေးကြောသွင်းကင်းသဖြင့်သွေးဆောင်တဏှာနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကွောငျးဖေါ်ပြခြင်းယခင်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်Breiter et al ။ , 1997) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အပြုသဘောအသင်းအဖွဲ့ (မြင့်တက် et al ။ , 2005)] သို့မဟုတ်သွေးကြောသွင်း methylphenidate အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်ပေနှင့်အတူဦးနှောက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်ပြောင်းလဲမှုများအားဖြင့်အကဲဖြတ်အဖြစ် [အပြုသဘောအသင်းအဖွဲ့ (Volkow et al ။ , 1999)] ။ fMRI နှင့်အတူအကဲဖြတ်အဖြစ်ကိုကင်းချိုးဖောက်စိတ်ဖိစီးမှုများကဖြစ်ပေါ်တဏှာလည်း ((caudate အပါအဝင်) ကို dorsal striatum ၏ activation နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်Sinha et al ။ , 2005) ။ အလားတူပင်တစ်ဦးကြားနေနှင့်ကင်းသောဗီဒီယိုအကြားတုံ့ပြန်မှုနှိုင်းယှဉ်ထားတဲ့ fMRI လေ့လာမှု (ဗီဒီယိုအားဖြင့်သွေးဆောင်ယင်းတဏှာဖို့ကိုကင်းဗီဒီယိုပြသနေစဉ် dorsal striatum အတွက်တိုးမြှင့် BOLD အချက်ပြ relatedGaravan et al ။ , 2000).
အဆိုပါ dorsal striatum (လုပ်ရပ်များ၏ရွေးချယ်ရေးနှင့်စတင်အတူပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါသည်Graybiel et al ။ , 1994), နှင့်မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများယခုနာတာရှည်မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်သောအရာတို့အပါအဝင်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှု-တုံ့ပြန်မှု (အလေ့အထ) သင်ယူမှုဖြန်ဖြေထဲမှာ ဆက်စပ်. အ (အဖြူနှင့်မက်ဒေါ်နယ်, 2002) ။ ထို့ကြောင့် dorsal striatal dopaminergic လှုပ်ရှားမှုနဲ့ cue-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာအကြားအသင်းအဖွဲ့ (စွဲလမ်းအတွက်တဏှာ၏အလေ့အထ-based (automatized) သဘာဝကိုထင်ဟပ်နိုင်Tiffany, 1990) ။ အများအပြားက preclinical နှင့်လက်တွေ့လေ့လာမှုများ (ကိုကင်းမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှုနှင့်အတူ dorsal striatum ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြLetchworth et al ။ , 2001; Porrino et al ။ , 2004; Volkow et al ။ , 2004) ။ တကယ်တော့, ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက် striatum ရဲ့ dorsal ဒေသများ (နာတာရှည်ဖြစ်စဉ်များအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းပိုပြီးကင်းသဖြင့်စေ့စပ်ဖြစ်လာLetchworth et al ။ , 2001; Porrino et al ။ , 2004) ။ အမှန်မှာက (ထို dorsal striatum ကိုကင်းစွဲထဲမှာအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောမူးယစ်ဆေးရှာ၏လေ့သဘောသဘာဝ mediates ကြောင်းတွေးဆနေပါတယ်Tiffany, 1990; Robbins နှင့် Everitt, 1999).
DA (လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆုလာဘ် (သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်များခန့်မှန်း) ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါသည်ပညာရှိ Rompre, 1989; Schultz et al ။ , 1997) ။ လက်ရှိလေ့လာမှုမှာကင်းသောဗီဒီယိုဖို့ထိတွေ့မှု (၎င်း၏ရှည်လျားသောအေးစက်သမိုင်းများက) အားကြီးသော "ဆုလာဘ်ခန့်မှန်း" ခဲ့ပေမယ့်လေ့လာမှုအတွက်ဘာသာရပ်များမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ် (အမှန်တကယ်ကိုကင်း) ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုမိခဲ့ကြသည်။ ဤအမှု၌ဤတွေ့ရှိချက်သူတို့နှင့်ဆက်နွယ်သော dorsal striatum အတွက် DA တိုးမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့, မပယ်မရှားနိုင် "ဟုအဆိုပါစားစရာဘို့အလိုဆန္ဒ။ " ဟုအဆိုပါ DA တိုးသေးငယ်ခဲ့ကြပေမယ့်အစားအသောက်တွေကိုပြသကျန်းမာဘာသာရပ်များ၏လေ့လာမှုများအတွက်သူတို့အားဆင်တူ ကိုကင်းတွေကိုထိတွေ့ပြီးနောက်ထက်အစားအစာလှုံ့ဆော်မှုထိတွေ့ပြီးနောက်, ဆက်စပ်မှု၏ညှနျကွားအလားတူဖြစ်ခဲ့သည်: အလိုဆန္ဒ (အ DA တိုး သာ. , သာ.Volkow et al ။ , 2002) ။ dorsal striatum ၏ DA activation မှာ "အလိုဆန္ဒ" (လိုသော) နဲ့ပတ်သက်လျှင်ကြောင့်လိုချင်သောအရာဝတ္တုရယူဖို့လိုအပ်တဲ့အပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အဆင်သင့်မှုလိုပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားအပြိုင်တွေ့ရှိချက်လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာမူးယစ်ဆေးစွဲအစားအစာ-အေးစက်တွေကိုအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသောရှင်သန်မှုအတွက်လိုအပ်သောအပြုအမူတွေကိုလှုံ့ဆော်သောတူညီ neurobiological ဖြစ်စဉ်များထိတွေ့ဆက်ဆံစေခြင်းငှါ၎င်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်အယူအဆအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါ striatum နှင့်စွဲပြင်းထန်မှုများ reactivity
အဆိုပါ cue-ရူးနှမ်း DA အပြောင်းအလဲများကိုလည်း (asi နှင့် CSSA နှင့်အတူအကဲဖြတ်) စွဲလမ်း၏ပြင်းထန်မှု၏ခန့်မှန်းချက်နှင့်အတူဆက်နွယ်ကြသည် ဟူ. ၎င်း, သာ. ၎င်းစွဲပြင်းထန်မှု, အပိုကြီးတဲ့ဟာ DA တိုး။ အဆိုပါ dorsal striatum အလေ့အထသင်ယူမှုအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရကြောင့်နာတာရှည်ဖြစ်စဉ်များအဖြစ်, ဒီအသင်းအဖွဲ့အလေ့အထများ၏ခိုင်မာထင်ဟပ်နိုင်ဘူး။ အဆိုပါ CSSA ကင်း-စွဲဘာသာရပ်များ (များတွင်ကုသမှုရလဒ်များကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ပြသထားပြီးတဲ့အတိုင်းအရှည်သည် ဖြစ်.Kampman et al ။ , 2002), ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုရန် DA စနစ်၏ reactivity ကိုကိုကင်း-စွဲဘာသာရပ်များအတွက်အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များများအတွက် biomarker ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဒါဟာအစစွဲလမ်းအတွက်အခြေခံ neurobiological ပြတ်တောက် compulsive မူးယစ်ဆေးရှာခြင်းနှင့်စားသုံးမှုမှဦးဆောင်သည့်အမူအကျင့်အလေ့အထဖြစ်ပေါ်ကြောင်း DA လမ်းကြောင်း၏ activation မှုသောအေးစက် neurobiological တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဒါဟာ (ဤအေးစက် neurobiological တုံ့ပြန်မှု corticostriatal နှင့် corticomesencephalic glutamatergic အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ရောင်ပြန်ဟပ်သည်ဟုယူဆရသည်Kalivas နှင့် Volkow, 2005).
နျူကလိယ accumbens နှင့်တဏှာ
ဒီလေ့လာမှုကတဏှာနဲ့ (NAc တည်ရှိပြီးသော) ventral striatum အတွက် DA အပြောင်းအလဲများအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့မတှေ့ခဲ့ပေ။ ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လေ့လာမှုများ NAc (ရှာကြံကင်းဖို့ cue-သွေးဆောင် relapse mediates သောအာရုံကြော circuitry ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာပြသနေသောကြောင့်ဤသည်မမျှော်လင့်ဘဲခဲ့Fuchs et al ။ , 2004) ။ ဒါဟာတဏှာအတွက် NAc များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု nondopaminergic ကြောင်းဆိုလိုနိုင်ဘူး။ အမှန်မှာထို NAc သို့ glutamatergic စီမံချက်များတိုက်ရိုက် (DA ရန်ပိတ်ဆို့မဟုတ်ကြောင်းတစ်ခုသက်ရောက်သော cue-ဆက်စပ်မူးယစ်ဆေးဝါး-ရှာကြံအပြုအမူအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီdi Ciano နှင့် Everitt, 2004) ။ သို့သော်အချို့စုံစမ်းစစ်ဆေး (Gratton နှင့်ပညာရှိ, 1994; Kiyatkin နှင့် Stein, 1996; Duvauchelle et al ။ , 2000; Ito က et al ။ , 2000; Weiss et al ။ , 2000), (အားလုံးမဟုတ်ပေမယ့်ဘရောင်းနှင့် Fibiger, 1992; Bradberry et al ။ , 2000), ကိုကင်းတွေကိုတင်ဆက်မှုနှင့်အတူ NAc အတွက် DA တိုးပြသခဲ့ကြသည်။ ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, ဒီတွေကို (noncontingent vs ဆက်ပြောပါတယ်) ပေးအပ်ခဲ့ပြီးသောအောက်ရှိအခြေအနေများထင်ဟပ်နိုင်ဘူး။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါ preclinical လေ့လာမှုများအတွက်လှုံ့ဆော်မှုလက်ရှိလေ့လာမှုမှာသူများအနေဖြင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနား function ကိုဝတ်ပြုကြလော့ သူတို့ကိုကင်းများ၏ရရှိနိုင်မှုအချက်ပြဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကတွဲသို့မဟုတ်ကင်းတင်ဆက်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျှင်သော်လည်း (ထိုတွေကိုပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုရှိကြ၏ကဲ့သို့), သူတို့ကတစ်ဦးခွဲခြားဆက်ဆံမှုလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်, သူတို့ကအေးစက်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်သူတို့သည်လည်းမျိုးစိတ်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု (ကြွက် vs လူသားမြားသညျ), စမ်းသပ် Paradigm (ဗီဒီယိုများတွေကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထံ vs တွေကိုဖေါ်ပြခြင်း), နှင့် DA (microdialysis နှင့် voltammetry vs ပေ) ကိုတိုင်းတာဘို့နည်းလမ်းများထင်ဟပ်နိုင်ဘူး။
အဆိုပါ PET နည်းစနစ်များ၏ကန့်သတ် Spatial resolution ကိုမဟုတ်ဘဲ NAc ထက် ventral striatum တိုင်းတာရန်ကျွန်တော်တို့ကိုသွေးဆောင်။ ဒါ့အပြင်သူ့ရဲ့အတော်လေးဆင်းရဲသားကိုယာယီ resolution ကို (voltammetry နှင့်အတူကင်းတွေကိုအစီရင်ခံအဖြစ်ရေတိုရေရှည်တည်တံ့ DA တိုး detect လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုကန့်သတ်, ကို 20-30 မိကာလအတွင်း DA အပြောင်းအလဲများကို detect လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့Phillips က et al ။ , 2003) ။ ထို့အပြင် [11ကို C] raclopride နည်းလမ်းမြင့်မားတဲ့: D ၏ဒေသများတွင် DA လွှတ်ပေးရန် detect လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးသင့်တော်ပါတယ်2 ထိုကဲ့သို့သော striatum အဖြစ်အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆပေမယ့်မရကျွန်တော်တိရိစ္ဆာန်များလေ့လာမှုများ cue-ရူးနှမ်း DA တိုး (ပြကြရသော amygdala အတွက် DA အပြောင်းအလဲမပြခဲ့ပါဘူးရှင်းပြနိုင်သည့်ထိုကဲ့သို့သော extrastriatal ဒေသများအဖြစ်အနိမ့်အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆ,Weiss et al ။ , 2000).
ကျနော်တို့ကိုပြသပေမယ့်အဆိုပါကင်း cue အားဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ DA အပြောင်းအလဲများကို၏ပြင်းအားအတွက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအဆိုပါစွဲလုပ်ငန်းစဉ်၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်ကြောင်းကြောင့်လည်းတ္ထုများရဲ့အလွဲသုံးစားမှုရှေ့ပြေးကြစေခြင်းငှါ DA ဆဲလ်၏ reactivity ကိုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုထင်ဟပ်နိုင်ဘူး။ ဒီလေ့လာမှုမှာ 17 ဘာသာရပ်များ၏ 18 ယောက်ျားတို့, အရှင်အနာဂတ်လေ့လာမှုများကျား, မကွဲပြားမှုဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်နေပါသည်။
မူးယစ်ဆေးတွေကိုအားဖြင့်ရူးနှမ်း dorsal striatum အတွက် DA တိုးစွဲပြင်းထန်မှုဟောကိန်းထုတ်သောကြောင့်, ဒီတဏှာနှင့်လူသားတွေအတွက်ကိုကင်းစွဲအတွက် nigrostriatal DA လမ်းကြောင်း၏အခြေခံပါဝင်ပတ်သက်မှု၏သက်သေသာဓကဖြစ်သည်။ ဒါဟာအစ cue-သွေးဆောင် striatal DA တိုးတားစီးနိုင်ဒြပ်ပေါင်းများကိုကင်းစွဲဆက်ဆံဖို့ pharmacological ကြားဝင်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ယုတ္တိပစ်မှတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အကြံပြုထားသည်။
ကိုကင်းတဏှာစဉ်အတွင်း dorsal striatum အတွက် dopamine အတွက်တိုးအလားတူတွေ့ရှိချက်များကပဏာမဒေတာအဖြစ်အစီရင်ခံခဲ့ကြသည် Wong က et al ။ (2003).
ဧပြီလ 10, 2006 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
တည်းဖြတ်မူမေလ 8, 2006 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
လက်ခံမေလ 14, 2006 ။
ဤလုပ်ငန်းကနျြးမာရေး Intramural သုတေသနအစီအစဉ် (အမျိုးသား Institute မှအရက်အပေါ်အလွဲသုံးမှုနှင့်အရက်) ၏အမျိုးသား Institutes အသုံးပြုပုံအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဦးစီးဌာနစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန Grant က DE-AC01-76CH00016 အသုံးပြုပုံနှင့်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု Grant က DA06278-15 အပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုကထောက်ခံခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ပံ့ပိုးမှုများကိုဒါဝိဒ်သည် Schlyer, ဒါဝိဒ်သည် Alexoff, ပေါလု Vaska, Colleen Shea, Youwen Xu, ပေါ်လင်း Carter က, Kith Pradhan, ကရင် Apelskog, Cheryl Kassed နှင့်ဂျင်မ် Swanson ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
စာပေးစာယူဒေါက်တာနိုရာ: D Volkow, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု, 6001 အလုပ်အမှုဆောင် Boulevard, ROOM တွင် 5274, Bethesda, MD 20892 မှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။ အီးမေးလ်: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
Bradberry CW, မျောက်တွေကိုအတွက် mesolimbic နှင့် sensorimotor striatum အတွက် extracellular dopamine အပေါ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းနှင့်ကိုကင်းတွေကို Barrett-Larimore RL, Jatlow P ကို, Rubino SR (2000) သက်ရောက်မှု။ J ကို neuroscience 20: 3874-3883 ။
Breier တစ်ဦး, စု TP, Saunders R ကို, Carson RE, Kolachana BS, က de Bartolomeis တစ်ဦးက, Weinberger DR, Weisenfeld N ကို, မဟော်ထ AK, Eckelman WC, Pickar: D (1997) Schizophrenia မြင့်မားသောစိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် Synaptic dopamine ပြင်းအားနှင့်ဆက်စပ်သည်: သက်သေအထောက်အထားအနေဖြင့် တစ်ဝတ္ထု positron ထုတ်လွှတ် tomography နည်းလမ်း။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 94: 2569-2574 ။
လူ့ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ကိုကင်းများ၏ Breiter HC, Gollub RL, Weisskoff RM, ကနေဒီ DN, Makris N ကို, Berke JD, Goodman JM, Kantor HL, Gastfriend DR, Riorden JP, Mathew RT ကို, ရို BR, Hyman SE (1997) ထူးခြားသောသက်ရောက်မှုများနှင့် စိတ်လှုပ်ရှားမှု။ အာရုံခံဆဲလျ 19: 591-611 ။
ဘရောင်း EE, Fibiger HC (1992) ကင်း-သွေးဆောင် conditional ရွေ့လျား: dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်ဆက်စပ်တိုး၏မရှိခြင်း။ neuroscience 48: 621-629 ။
cue- သွေးဆောင်ကင်းတပ်မက်စဉ်အတွင်း Childress AR, Mozley PD, McElgin W, Fitzgerald J, Reivich M, O'Brien CP (1999) Limbic activation ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 156: 11-18 ။
Childress AR, Franklin T, Listerud J, Acton P, O'Brien CP (2002) ကိုကင်းတပ်မက်သောပြည်နယ်များအားရပ်တန့်ခြင်း၊ လှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာပြယုဂ်များ။ ခုနှစ်တွင်: Neuropsychopharmacology: တိုးတက်မှု၏ပဉ္စမမျိုးဆက်။ 1575-1590 ။ Philadelphia တွင်: Lippincott Williams & Wilkins (Davis KL, Charney D၊ Coyle JT, Nemeroft C, eds) ။
လူသားမြားသဖွငျ့စော်ကား di Chiara, G, Imperato တစ်ဦးက (1988) မူးယစ်ဆေးဝါးဦးစားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေ့လျားကြွက်များ၏ mesolimbic စနစ် Synaptic dopamine ပြင်းအားတိုးမြှင့်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 85: 5274-5278 ။
di Ciano အဆိုပါ basolateral amygdala နှင့်နျူကလိယအကြား P ကို, Everitt BJ (2004) တိုက်ရိုက် interaction က core ကိုကြွက်များအားဖြင့်ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူအခြေခံ accumbens ။ J ကို neuroscience 24: 7167-7173 ။
အမူအကျင့်လှုပ်ရှားမှုအတွင်း Duvauchelle CL, Ikegami တစ်ဦးက, Castaneda အီး (2000) အေးစက်တိုးခြင်းနှင့်သွေးကြောသွင်းကင်းထုတ်လုပ် dopamine အဆင့်ဆင့် accumbens ။ ပြုမူနေ neuroscience 114: 1156-1166 ။
အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်အတွက် Friston KJ, Holmes က AP, Worsley KJ, Poline JB, Frith CD ကို, Frackowiak RSJ (1995) စာရင်းအင်း parametric မြေပုံ: အထွေထွေ linear ချဉ်းကပ်နည်း။ Hum ဦးနှောက် Mapp 2: 189-210 ။
Fuchs RA, အီဗန် Ka, က Parker အမတ်, Conditions cue-သွေးဆောင်ခြင်းနှင့်ကြွက်များတွင်ရှာကြံကင်းကင်း-ရစေတယ် reinstatement အတွက် orbitofrontal cortex ငျဒသေ၏ကြည့်ရှု RE (2004) Differential ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ J ကို neuroscience 24: 6600-6610 ။
Garavan H ကို, Pankiewicz J ကို, Bloom တစ်ဦး, ချို JK, Sperry L ကို, ရော့စ်တီဂျေ, Salmeron BJ, မြင့်တက် R ကို, ကယ်လီ: D, Stein EA ၏ (2000) Cue-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာ: မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးလှုံ့ဆော်မှုများအတွက် neuroanatomical သတ်မှတ်ချက်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 157: 1789-1798 ။
Gratton တစ်ဦးက, ပညာရှိ RA (1994) Drug- နှင့်ကြွက်များတွင်သွေးကြောသွင်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်း dopamine-related လြှပျစစျအချက်ပြမှုများအတွက်အပြုအမူ-ဆက်စပ်အပြောင်းအလဲများကို။ J ကို neuroscience 14: 4130-4146 ။
Graybiel လေး, Aosaki T က, Flaherty AW, Kimura M (1994) က Basal ganglia နှင့်သပ္ပါယ်မော်တာထိန်းချုပ်။ သိပ္ပံ 265: 1826-1831 ။
Haber SN, Fudge JL (1997) ကမျောက် substantia nigra နှင့် VTA: Integrated circuitry နှင့် function ကို။ Crit ဗြာ Neurobiol 11: 323-342 ။
Ito က R ကို, Dalley JW, Howes SR, Robbins TW သည်နျူကလိယအခြေအနေများ dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက် Everitt BJ (2000) Dissociation ကိုကင်းတွေကိုရန်နှင့်ကြွက်များအတွင်းကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူစဉ်အတွင်းတုံ့ပြန်မှုအတွက် core နဲ့ shell ကို accumbens ။ J ကို neuroscience 20: 7489-7495 ။
Ito က R ကို, Dalley JW, Robbins TW တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါး-ဆက်စပ် cue များ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူစဉ်အတွင်း dorsal striatum အတွက် Everitt BJ (2002) Dopamine လွှတ်ပေးရန်။ J ကို neuroscience 22: 6247-6253 ။
Kalivas PW, Volkow ND (2005) စွဲလမ်း၏အာရုံကြောအခြေခံ: လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုရောဂါဗေဒ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 162: 1403-1413 ။
Kampman KM, Volpicelli JR, McGinnis DE, Alterman AI, Weinrieb RM, D'Angelo L, Epperson LE (၁၉၉၈) ကိုကင်းရွေးချယ်သည့်ပြင်းထန်မှုအကဲဖြတ်ချက်၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်တရားဝင်မှု။ စွဲ Behav 1998: 23-449 ။
Kampman KM, Volpicelli JR, Mulvaney F, Rukstalis M, Alterman AI, Pettinati H, Weinrieb RM, O'Brien CP (2002) ကိုကင်းမှီခိုမှုအတွက်ကိုကင်းမှီဝဲမှုအတွက်ကိုကင်းထုတ်ယူမှုပြင်းထန်မှုနှင့်ဆီးအဆိပ်အတောက်ရလဒ်များသည်ဆေးကုသမှုမှရလဒ် စွဲ Behav 27: 251-260 ။
Kiyatkin EA ၏, Stein EA ၏ (1996) နျူကလိယထဲမှာအေးစက်အပြောင်းအလဲများကိုကြွက်များတွင်သွေးကြောသွင်းကင်းအားဖြင့်သာတည် dopamine signal ကို accumbens ။ neuroscience လက်တ 211: 73-76 ။
dopamine Transporter စည်းနှောင် site ကိုသိပ်သည်းဆအတွက်အပြောင်းအလဲများ Letchworth SR, Nader, MA, Smith က HR, Friedman DP, Porrino LJ (2001) တိုးတက်မှုမျောက်တွေကိုအတွက်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏ရလဒ်အဖြစ်။ J ကို neuroscience 21: 2799-2807 ။
Logan J ကို, မုဆိုး JS, Volkow ND, Wolf ကအေပီ, Dewey SL, Schlyer DJ သမား, MacGregor RR, Hitzemann R ကို, Bendriem B, Gatley SJ (1990) အချိန်-လှုပ်ရှားမှုတိုင်းတာကနေ binding Reversible လုပ် radioligand ၏ Graphical ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ [N-11C- ဖို့လျှောက်ထား methyl] - (-) - လူ့ဘာသာရပ်များအတွက်ကင်းပေလေ့လာမှုများ။ J ကို Cereb သွေးစီးဆင်းမှု Metab 10: 740-747 ။
Logan J ကို, Volkow ND, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ, Dewey SL, MacGregor R ကို, Schlyer: D, Gatley SJ, Pappas N ကိုဘုရင် P ကို ​​[1994C] raclopride ဦးနှောက်အတွက် binding အပေါ်သွေးစီးဆင်းမှု၏ (11) အကျိုးသက်ရောက်မှု: မော်ဒယ် Simulator နှင့် kinetic ပေအချက်အလက်များ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ J ကို Cereb သွေးစီးဆင်းမှု Metab 14: 995-1010 ။
McLellan ကို AT, Kushner H ကို, Metzger: D, Peters R ကို, Smith ကငါ Grissom, G, Pettinati H ကို, အစွဲ Severity Index ၏ Argeriou M (1992) ကပဉ္စမထုတ်ဝေ။ J ကို Subst အလွဲသုံးမှုရယူထားသော 9: 199-213 ။
Neisewander JL, O'Dell LE, Tran-Nguyen LT, Castaneda E, Fuchs RA (1996) ကိုကင်းသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပြုသည့်အပြုအမူအားပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလအတွင်းနျူကလိယတွင်ဒြပ်ပေါင်းများလျှံကျသွားသည်။ Neuropsychopharmacology 15: 506-514 ။
O'Brien CP၊ Childress AR၊ Ehrman R, Robbins SJ (1998) မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုတွင်အကြောင်းရင်းများ J ကို Psychopharmacol 12: 15-22 ။
Phillips က PE, Stuber GD, Heien ML, Wightman RM, လွှတ်ပေးရေးကိုကင်းရှာအားပေးအားမြှောက် Subsecond dopamine Carelli RM (2003) ။ သဘာဝတရား 422: 614-618 ။
Porrino LJ, လီယွန်: D, Smith က HR, Daunais JB, Nader, MA (2004) ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး limbic, အသင်းအဖွဲ့နှင့် sensorimotor striatal ဒိုမိန်းများအတွက်တိုးတက်သောပါဝင်ပတ်သက်မှုထုတ်လုပ်သည်။ J ကို neuroscience 24: 3554-3562 ။
မြင့်တက် RC, Salmeron BJ, ရော့စ်တီဂျေ, အာမင် SL, Sanfilipo M က, Hoffman ဟာ RG, Bloom AS, Garavan H ကို, Stein EA ၏ (2005) BOLD fMRI သုံးပြီးကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်းမြင့်တဏှာ၏ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောဆက်စပ်မှု။ NeuroImage 26: 1097-1108 ။
Robbins TW, Everitt BJ (1999) မူးယစ်ဆေးစွဲ: မကောင်းတဲ့အလေ့အထတက်ထည့်ပါ။ သဘာဝတရား 398: 567-570 ။
Schultz W ကဒါယန်း P ကို, မွန်တဂူ PR စနစ် (1997) ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်တစ်ခုအာရုံကြောအလွှာဟာ။ သိပ္ပံ 275: 1593-1599 ။
စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာနဲ့ဆက်စပ် Sinha R ကို, Lacadie ကို C, Skudlarski P ကို, Fulbright RK, Rounsaville BJ, Kosten TR, Wexler BE (2005) ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောလှုပ်ရှားမှု: တစ်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ Psychopharmacology (Berl) 183: 171-180 ။
Tiffany ST (1990) မူးယစ်ရမ္မက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲအပြုအမူ၏တစ်ဦးကသိမြင်မှုမော်ဒယ်: အလိုအလျှောက်ခြင်းနှင့် nonautomatic ဖြစ်စဉ်များ၏အခန်းကဏ္ဍ။ Psychol ဗြာ 97: 147-168 ။
Tiffany ST, Singleton ကအီး, Haertzen, CA, Henningfield je (1993) တစ်ဦးကိုကင်းတဏှာမေးခွန်းလွှာ၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ 34-19: မူးယစ်ဆေးအရက် 28 မူတည်တယ်။
cue-controlled ကင်းရှာထဲမှာ dorsal striatum ၏ Vanderschuren LJ, Di Ciano P ကို, Everitt BJ (2005) ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ J ကို neuroscience 25: 8665-8670 ။
Volkow ND, မုဆိုး JS, လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ binding Carbon-1993-raclopride ၏ထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံ၏ဝမ် GJ, Dewey SL, Schlyer: D, MacGregor R ကို, Logan J ကို, Alexoff: D, Shea ကို C, Hitzemann R ကို (11) Reproducibility ။ J ကို Nucl Med 34: 609-613 ။
Volkow ND, ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, Logan J ကို, Schlyer: D, Hitzemann R ကို, Lieberman J ကို, Angrist B, Pappas N ကို, MacGregor R ကို (1994) လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ [11C] raclopride နှင့်အတူ endogenous dopamine ယှဉ်ပြိုင် Imaging ။ synapses 16: 255-262 ။
Volkow ND, ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, Hitzemann R ကို, Angrist B, Gatley SJ, Logan J ကို, Ding YS, ကိုကင်းချိုးဖောက်ပိုင်ခွင့် striato-orbitofrontal ဇီဝြဖစ်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူ methylphenidate-သွေးဆောင်တဏှာ၏ Pappas N ကို (1999) အသင်းမှ: စွဲအတွက်ဂယက်ရိုက် ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 156: 19-26 ။
လူသားတွေအတွက် Volkow ND, ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, Logan J ကို, ဂြနျေး M က, Franceschi: D, Wong ကနေ C, Gatley SJ, Gifford AN, Ding YS, Pappas N ကို (2002) "Nonhedonic" အစာလှုံ့ဆျောမှုအတွက် dorsal striatum နှင့် methylphenidate အတွက် dopamine ကပါဝင်ပတ်သက် ဒီသက်ရောက်မှုကိုချဲ့ထွင်။ synapses 44: 175-180 ။
Volkow ND, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲလမ်းအတွက် Swanson JM (2004) Dopamine: ပုံရိပ်လေ့လာမှုများနှင့်ကုသမှုသက်ရောက်မှုတွေကနေရလဒ်တွေကို။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု 9: 557-569 ။
Weiss က F, Maldonado-Vlaar CS, Parsons LH, Kerr TM, ကြွက်များတွင်မူးယစ်ဆေး-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏ Smith က DL, ဘင်-ရက်ရှာဟာအို (2000) ထိန်းချုပ်ရေး: ငွိမျးအော်ပရေတာ-တုံ့ပြန်နှင့် extracellular dopamine အဆင့်ဆင့်၏ပြန်လည်နာလန်ထူအပေါ်သက်ရောက်မှု amygdala နှင့်နျူကလိယ accumbens ၌တည်၏။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 97: 4321-4326 ။
White ကမိုင်, မက်ဒေါ်နယ် RJ (2002) ကိုကြွက်၏ဦးနှောက်အတွက်အကွိမျမြားစှာအပြိုင်မှတ်ဥာဏ်စနစ်တွေ။ 77-125: Neurobiol Mem ကို 184 လေ့လာပါ။
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA, Rompre PP (1989) ဦးနှောက် dopamine နဲ့ဆုလာဘ်။ Annu ဗြာ Psychol 40: 191-225 ။
Wong က DF, Lee က JS, Maini တစ်ဦးက, Zhou Y ကို, Kuwabara H ကို, Endres ကို C, Brasic J ကို, Dogan AS, Schretlen D ကိုအလက်ဇန္ဒားက M, Kimes အီး, Ernst M က, Jasinski: D, လန်ဒန် ED, Zukin S ကို (2003) Cue သွေးဆောင်ကင်း တဏှာနှင့် dopamine လွှတ်ပေးရန်: နည်းစနစ်များနှင့်ဆက်စပ်။ J ကို Nucl Med 44: 67 ။
အဆိုပါဘတ်ထဲမှာ Nipping Cue reactivity: Baclofen Subliminal မူးယစ်ဆေးတွေကိုအားဖြင့် Limbic Activation ထုတ်ယူတားဆီးပေးပါသည် အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်,2ဧပြီလ 2014, 34 (14): 5038-5043
Dopamine နှင့်ကတိထားရာအပိုဆု၏သိမှု, အားနည်းချက်တွေ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံ, 1 ဧပြီလ 2014, 25 (4): 1003-1009
Cue-သွေးဆောင်တဏှာပြဿနာ Gambler အတွက် Striatal Value ကိုနေရင်မြန်အောင်အတွက်အပြောင်းအလဲများကနေတဆင့် Impulse တိုးတက်စေနိုင်ခြင်း အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 26 မတ်လ 2014, 34 (13): 4750-4755
အသက်-အလယ်တန်းနှင့်အထက်အမျိုးသမီးများ2အလိုက်အတွက်အစားအစာစွဲစကေးတိုင်းတာခြင်း အဆိုပါလက်တွေ့အာဟာရ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်, 1 မတ်လ 2014, 99 (3): 578-586
ခြစ်-သွေးဆောင်သာယာသော၏နှောက်ကိုယ်စားပြုမှု Neurophysiology ၏ဂျာနယ်, 1 ဖေဖော်ဝါရီလ 2014, 111 (3): 488-498
ဆုကြေးနှင့်ဆန္ဒရှိအတွက် Substantia Nigra နှင့် Ventral Tegmental Dopamine အာရုံခံအလားတူအခန်းကဏ္ဍ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 15 ဇန်နဝါရီလ 2014, 34 (3): 817-822
ပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာများအတွက်စိတ်ကြွဆေးထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်အတူ Extrtriatal dopaminergic အပြောင်းအလဲများ အာရုံကြော, Neurosurgery & စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဂျာနယ်, 1 ဇန်နဝါရီ 2014, 85 (1): 23-30
cue- evoked ကိုကင်း "Craving": အ Accumbens Core အတွင်း Dopamine ၏အခန်းကဏ္။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 28 သြဂုတ်လ 2013, 33 (35): 13989-14000
မျိုးဗီဇစွဲထဲမှာမူးယစ်ဆေး Cue reactivity အပေါ် Abstinence အကျိုးသက်ရောက်မှု x: multimode အထောက်အထား အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 12 ဇွန်လ 2013, 33 (24): 10027-10036
မူးယစ်ဆေးစွဲမှုအတွက်စနစ်များအဆင့် Neuroplasticity ဆေးပညာအတွက်အေးနွေဆိပ်ကမ်းပတ်သ က်. , 1 မေလ 2013,3(5): a011916
နျူကလီးယပ် Accumbens နှင့်အာရုံ cortical အကြားတွင်အပြန်အလှန်ဂီတဆုကြေး Value ကိုခန့်မှန်းပြီး သိပ္ပံ, 12 ဧပြီလ 2013, 340 (6129): 216-219
နျူကလိယ၏ dopaminergic innervation ၏အခန်းကဏ္ဍကြာရှည် abstinence နှင့်နောက်ခံ D1- နှင့်ကြွက်များတွင် D2 တူသောအဲဒီ receptor ယန္တရားများရှာ cue-သွေးဆောင်မော်ဖင်းအကိုက်အတွက် shell ကိုနှင့် dorsolateral caudate-putamen accumbens Psychopharmacology ၏ဂျာနယ်, 1 ဖေဖော်ဝါရီလ 2013, 27 (2): 181-191
အောက်မေ့အာရုံကိုဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်အာရုံကြောနဲ့ Self-အစီရင်ခံ cue-သွေးဆောင်တဏှာလျော့ကျစေပါတယ် လူမှုရေးသိမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေအာရုံကြောသိပ္ပံ, 1 ဇန်နဝါရီလ 2013, 8 (1): 73-84
တစ်ဦး Multi-လက်ခဏာတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်ပံ့ပိုးမှုများကိုသာ: အသစ်အဆန်းများနှင့်ကင်းစွဲဖို့အားနည်းဆောင်ရကြ်ူခင်း ဆေးပညာအတွက်အေးနွေဆိပ်ကမ်းပတ်သ က်. , 1 နိုဝင်ဘာလ 2012,2(11): a011940
အပြစ်ပေးကင်းရှာအံ့သောငှါအတွက် Dorsolateral နှင့် Midlateral Striatum ၏အခန်းကဏ္ဍ Differential အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 28 မတ်လ 2012, 32 (13): 4645-4650
အာရုံခံအတွက် ZBP1 ၏ Transgene စကားရပ်ကိုကင်း-ဆက်စပ်အေးစက်ဖိနှိပ် သင်ယူခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်၊ ၁၂ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၂၊ ၁၉ (၂) - ၃၅-၄၂
စွဲလမ်း၏ Neuropharmacology ဘယ်လိုကုသမှုအသိပေး ဗြိတိန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသတင်းလွှာ, 1 ဒီဇင်ဘာလ 2010, 96 (1): 93-110
သည်အထိအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာအတွေ့အကြုံပြီးနောက်ရှာလေ့ကင်းဖို့ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားသည်ကနေ shift အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 17 နိုဝင်ဘာလ 2010, 30 (46): 15457-15463
တစ်ဦးက Neuroimaging အမြင်: ADHD နှင့်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှု Disorder (Sud) ၏ Comorbidity အာရုံစူးစိုက်မှု Disorders ၏ဂျာနယ်, 1 စက်တင်ဘာလ 2010, 14 (2): 109-120
Prefrontal-striatal လမ်းကြောင်းတဏှာ၏သိမြင်မှုစည်းမျဉ်းအခြေခံ PNAS, 17 သြဂုတ်လ 2010, 107 (33): 14811-14816
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်သွေးဆောင်သောအရပ်နှင့်မှတ်ဉာဏ်များလည်းပြတ်တောက် context-မှီခိုထုံးစံ၌စိတ်ခွန်အားနိုးဆုတ်ခွာအားနည်းနေခြင်း PNAS,6ဇူလိုင်လ 2010, 107 (27): 12345-12350
မေတ္တာတော်၌တည်ပယ်ချအတူဆုလာဘ်, စွဲလမ်းနှင့် Emotion စည်းမျဉ်းဥပဒေစနစ်များ Associated Neurophysiology ၏ဂျာနယ်, 1 ဇူလိုင်လ 2010, 104 (1): 51-60
ကိုကင်းစွဲထဲမှာချို့ယွင်းထိုးထွင်းသိမြင်: ဓာတ်ခွဲခန်းသက်သေအထောက်အထားများနှင့်ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှု ဦးနှောက်, 1 မေလ 2010, 133 (5): 1484-1493
ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် Dopamine, Reward နှင့် Frontostriatal Circuitry - ပါကင်ဆန်ရောဂါ - Functional Imaging မှ Insights လက်တွေ့ EEG နှင့်အာရုံကြောသိပ္ပံ, 1 ဧပြီလ 2010, 41 (2): 87-93
Cue-သွေးဆောင် Dopamine ဖြန့်ချိကင်းဦးစားပေးမှုဟောကိန်းထုတ်: Positron ထုတ်လွှတ်မှု Tomography လေ့လာရေးအဘိုးမပေးဘဲကြွက် Moving အတွက် အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 13 မေလ 2009, 29 (19): 6176-6185
ကိုကင်းစွဲထဲမှာမူးယစ်ဆေးစကားမှ Dopaminergic တုံ့ပြန်မှု အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်,6မေလ 2009, 29 (18): 6001-6006
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူ Parkinsonian လူနာတိုးပွားလာ striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်: တစ် [11C] raclopride ပေလေ့လာမှု ဦးနှောက်, 1 မေလ 2009, 132 (5): 1376-1385
ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမျိုးသုဉ်းနေစဉ်အတွင်းမျိုးစုံမှတ်ဉာဏ်စနစ်များ၏ဆွေမျိုးထိရောက်မှုပွောငျးလဲ သင်ယူခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်၊ ၂၃ 23ပြီ ၂၀၀၉၊ ၁၆ (၅) - ၂၉၆-၂၉၉
Tool ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုအသိပညာမှ Related ဦးနှောက်နေရာများနီကိုတင်းမူတည်စဉျးစားကွညျ့ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 15 ဧပြီလ 2009, 29 (15): 4922-4929
obsessive-compulsive ရောဂါ၏အဓိကလက္ခဏာအတိုင်းအတာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကွဲပြားအာရုံကြောစနစ်များကကမကထပြုခဲ့ကြသည် ဦးနှောက်, 1 ဧပြီလ 2009, 132 (4): 853-868
စွဲလမ်းနှင့်အဝလွန်ခြင်းအတွက်ထပ်အာရုံခံဆားကစ်: စနစ်များကိုရောဂါဗေဒ၏သက်သေအထောက်အထားများ တော်ဝင် Society က B ကို၏ဒဿနအရောင်းအဝယ်: ဇီဝသိပ္ပံ, 12 အောက်တိုဘာလ 2008, 363 (1507): 3191-3200
အဆိုပါ compulsive မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအလေ့အထများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အားနည်းချက်နဲ့စွဲအခြေခံအာရုံကြောယန္တရားများ တော်ဝင် Society က B ကို၏ဒဿနအရောင်းအဝယ်: ဇီဝသိပ္ပံ, 12 အောက်တိုဘာလ 2008, 363 (1507): 3125-3135
အဆိုပါ Lateral ၏ Inactivation သို့သော်မ Medial Dorsal Striatum ပြန်ကြားခြင်းတီး Pavlovian လှုံ့ဆော်မှုများ၏ Excitatory သက်ရောက်မှုဖယ်ရှား အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 19 ဒီဇင်ဘာလ 2007, 27 (51): 13977-13981
လူသားတွေဟာအတွက်အေးစက် Dopamine ဖြန့်ချိ: တစ်ဦးက Positron ထုတ်လွှတ်မှု Tomography ဖက်တမင်းဆေးပြားနှင့်အတူ [11C] Raclopride လေ့လာ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 11 ဧပြီလ 2007, 27 (15): 3998-4003
အီသနောဟာ Dorsal Striatum အတွက် NR2B-NMDA receptor လှုပ်ရှားမှု၏ Long-Term နည်းပြ Induces: အရက်များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအပြုအမူသောက်သုံး အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 28 မတ်လ 2007, 27 (13): 3593-3602